Halatra :: Tratra teo am-bavahady ity lehilahy nandroba tranona masera • AoRaha
Halatra Tratra teo am-bavahady ity lehilahy nandroba tranona masera
Tsy mbola tafavoaka ny vavahady akory dia tratra ny lehilahy iray, iraika amby dimampolo taona, avy nangalatra tao amin’ny tranon’ny masera teny Soavimbahoaka Androhibe, afak’omaly maraina. Mboa hita teny aminy ny entana halatra: solosaina finday iray sy finday avo lenta roa.
Tsy vaovao amin-dry masera eny Soavimbahoaka ny endrik’io lehilahy izay voalaza fa olona sahirana matetika tonga mangataka fanampiana ao amin’izy ireo io. Tamin’ny alahady, dia tonga toy ny fanaony nikasa hangataka fanampiana ilay lehilahy. Nandondona teo amin’ny biraon’ny masera tompon’andraikitra izy. Nisokatra ny varavarana ary tsikariny ho tsy misy olona tao amin’ny birao. Tamin’izany indrindra no nidirany an-tsokosoko sy nibatany ny solosaina niaraka tamin’ny finday roa teo ambony latabatra.
Nambaran’ny loharanom-baovao akaiky ny famotorana fa nasitrik’ilay lehilahy tao anaty akanjony ireo entana halatra. Tazan’ny masera iray ny fivoahany. Nasainy nijanona izy ary nosavaina. Teo ihany dia nampandre ny mpitandro filaminana ireo lasibatra. Niteny tamin’ny mpanao famotorana ity voarohirohy, nandritra ny fakàna am-bavany azy, fa ny fakam-panahy no nanosika azy nanao ny asa ratsy.
Fahatsiarovana mpanoratra Noraketina ho boky ny tantaran’ny mompera Rahajarizafy Antoine de Padoue